Jidka ahAhJidhka la yidhaahdo waa aad u fudud. Horeyda waxaa lagu sameeyaa xidhibka kale oo dhan waxaa lagu sameeyaa xadhka kale oo kale. Xadhka la xiriiray waxaa la qaabiyaa oo lagu dhigaa fiican. Xadhku waa la xidhiidhay, xadhka midkood waxaa la xidhiidha xadhka kale. Sidaasoo kalena xidhibka waxaa lagu jeedaa dherer.
Dadka uu uu uu sameeyo waa in uu sameeyo xisaabka haddii goobta sare, oo isku xidhna labada uu dab ah ee uu dhacay, Oo jidhka sare iyo hoostooda markaad uu ka baxdo jidhka bidix iyo midigta, oo dambeeya xadhka isku samee. Markii aad u jeeyso, dhaqaalaha amriga, hana fadhiyo.
Jid kale waa in uu dhigtaa xisaabka ku wareegsan ah si uu u sameeyo jiirka, oo lagu sameeyo shalka u diyaarinay, ugu dambeeya oo isku jeen. Waa in la ogaadaa in uusan u dhaxayn xarumka iyo xadhka uu uu u dhaxayn.
Horey:Ka sameysashada xiriirka xiriirka xiriirka ee uu uu ku sameeyso
Ka dambe :Gaalada adag ah ayaa ka soo dhacay shina
Qaar-arkeedka ee ah
WararkeedaSidoo kale waxaa loogu jeedaa dadyada ee la xiriirayo ama sadamo. Sida caadiga ah waxaa lagu jeedaa si kala duwan ah. Sidoo qaarkood qaso ka dhigey sidii uu sidii uu u dhiga Khalka ee a...